पल शाह र मलिका महतको जोडी फिल्ममा के होला ? « Ramailo छ
प्रकाशित मिति : Jul 25, 2021
पल शाह र मलिका महतको जोडी म्युजिक भिडियोमा जमिरहेको छ । पिएम जोडी फिचर्ड ‘फुलबुट्टे सारी’ देखि ‘आँखामा आउने सपनी’ गीतका भिडियोले युटुवमा करोड बढी भ्युज पाएका छन् ।
शनिबार मात्रै पल र मलिका अभिनित चौथो भिडियो ‘तिम्रो मनमा ए कान्छी’को फिमेल भर्सन सार्वजनिक गरियो । भिडियो सार्वजनिक प्रेसमिटमा पिएम जोडीले म्युजिक भिडियोको सफलतादेखि फिल्मको योजनासम्म सुनाए । म्युजिक भिडियोमा जमिरहेको जोडी चाँडै फिल्ममा देखिने दुवैले स्विकारे । यद्पी कुनै पनि फिल्म खेल्ने भन्ने पक्का भैनसकेको उनीहरुले बताए ।
म्युजिक भिडियोमा हिट मानिएको पल र मलिकाको जोडीलाई थुप्रै निर्माताले प्रस्ताव गरेको बुझिन्छ । पिएम जोडीको पहिलो फिल्म चाहिं केन्द्र मोसन पिक्चर्स बाटै आउने सम्भावना देखिन्छ । म्युजिक भिडियोमा जस्तै फिल्ममा पनि पल र मलिकाको जोडी जम्ला त ? प्रतिक्षा गरौं ।